Dreamlinux waa la joojiyay | Laga soo bilaabo Linux
Dreamlinux waa la joojiyay
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Qaybinta, Noticias
War murugo leh ayaa gacanta iiga imanaya Unixmen: Riwaayad waa la joojiyey Sababaha? Iyaga lama yaqaan hadda. In kasta oo bilowgii sanadka nooca 5aad ee qaybintaan soo baxday, sida muuqata kama sii heli doonno taageeradaas.
In uu bogga internetka Iyagu wax kama sheegaan, waxay nooga tagayaan sidii tacsiyeyn aan ugu soo dejisan karno qayb ka mid ah Farshaxanka qaybtan aadka u wanaagsan. Riwaayad waa (ama ahaa) ku saleysan Tijaabada Debian oo isticmaal Degaankeyga Desktop ee aan seegay Xfce.
In kasta oo aysan ahayn sida ugu fudud ee qaybinta, Riwaayad waxaa si buuxda loogu isticmaali karaa kombiyuutarada hoose, oo waxay na siisay muuqaal diiran oo xarrago leh, oo inta badan diiradda saaraya isticmaalaha ugu dambeeya.
Ujeeddadiisu waxay ahayd inuu noqdo sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Waxay lahayd hal rakibid nidaam rakibid ah (Hal-guji rakib nidaamka) maxay qabteen Riwaayad aad u fudud in la isticmaalo qaabka. Intaa waxaa dheer, markii ugu horreysay waxaa ku jiray koodhadh fiidiyoow ah, flashplayer iyo codsiyo taxane ah oo la sameeyay Riwaayad ikhtiyaar aad u fiican oo ah Nidaamka Hawlgalka ugu muhiimsan.
Waxaad ka soo dejisan kartaa qayb ka mid ah farshaxanka xiriiriyeyaasha soo socda:
Mawduuca Icon Mowduuca loogu talagalay Xfwm Mawduuca Gtk
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Dreamlinux waa la joojiyay
Aad ayuu u xun yahay, sidoo kale waxa aan ka arko shabakadda oo aan sii shaqeynaynin: /, nasiib darro runtii. Salaan.
Kaliya markii ay dib u dhalatay ……….
Marnaba iskuma dayin, ma garanayo waxaan dhahayo.
Xaqiiqdii ninki horumariyey mar hore ayuu dhameeyay jaamacada hadana wuxuu naftiisa u hurayaa inuu sameeyo waxyaabo culus oo lacag siiya, waa isla sababtaas sababta keentay in codsiyada sida TV time ama camstudio ay joojiyaan horumarintooda waana isla sababta ay ciyaaruhu u yihiin uumiga ama waalka ayaa ku dhici doona Linux nidaamkaas waxaa isticmaala oo kaliya ardayda xiisaha leh iyo kumbuyuutarka ee awoodda wax iibsi yar iyo da 'yar laakiin marka ay bislaadaan oo ay noqdaan xirfadlayaal waxay ku dambeeyaan isticmaalka mac ama waxay ku laabanayaan daaqadaha, xitaa sharad kuma gelin xitaa jilayaasha caanka ah ee ka jira adduunka ilaha furan waxay u adeegsadaan tusaale ahaan linus ama icaza
Ku jawaab cosiaca
Waxaa jira kuwa u taga Mac oo aakhirka ka maqnaada Linux, mana u maleynayo taas awoodeeda wax iibsi darteed. Haddii New York Stock Exchange iyo NASA ay adeegsadaan Linux, uma maleynayo inay tahay sababtoo ah kuma filna Macs sidoo kale.
Iyo intaan ogahay, aasaasayaasha elav iyo KZKG ^ Gaara way shaqeeyaan on Linux.
Haa .. in ka badan 5 sano oo uu penguinku soo jiitamayo .. Aadna u faraxsan ..
Labada elav iyo aniga waxaan isticmaalnaa 100% Linux, labadeenana barnaamij, waxaan maamulnaa shabakadaha, naqshadaha elav (maahan pro, laakiin kudhowaad), sidoo kale… waxyaabo badan adoon isticmaalin Windows 🙂
Rue Lab dijo
Juat ?? Troll ayaa la ogaaday !!
Jawaab Ruda Macho
Cosiaca, si fiican ma noqon doono tixraaca ugu fiican laakiin waa inaan dhahaa qoyskeyga waxaan ku heynaa 6 buugaag iyo 2 macs, aniguna waxaan ka mid ahay kuwa maalin walba la shaqeeya Linux, waxaan noqon karaa kan kaliya ee shirkadayda adeegsada laakiin fadlan dadka intiisa kale waxay qabsadaan daaqadaha maxaa yeelay wax kale ma yaqaanaan, runtiina si dhib yar ayeey u yaqaanaan mac, hadaan iphone aheyn, xitaa ma ogaan laheyn astaanta tufaaxa. Sidii qoyskeygu yiraahdeen, waxay ka shaqeeyaan Linux hooyaday (65 sano jir ah) ilaa wiilkeyga 6 jirka ah oo adeer u ah maalin kasta way qabsadaan, marka waxaan u maleynayaa inaysan u bislaanin ama yeelan doonin awood wax iibsi oo ka weyn, aniga hada mac waa khiyaano laakiin waa wax aan la qaban, sidoo kale waxaan u maleynayaa inay jiraan dad kale oo badan oo aniga oo kale ah oo kor u qaadaya isticmaalka Linux nolol maalmeedka iyo shaqada waana taas waxa lagu xisaabtamo dhamaadka sababtoo ah kala duwanaanta badan ee isticmaalayaasha, bulshada ayaa ka weyn noqda oo waxaan lahaan doonnaa isticmaaleyaal caadi ah xitaa kuwa ugu khibradda badan, dadka yimid iyo dadka ku koray isticmaalka Linux, sifiican loogu talagalay riyal Linux waligey iskuma dayin tan disto ceeb laakiin waxaa jiri doona kuwa kale oo dhasha isla markaana leh fikrado wanaagsan, salaan kadib
cosiaca .... Runtii in Linux ay tahay uun koox dad ah oo aan samayn?
Ogow wax yar oo ah waxa loo yaqaan RedHat, SuSe, Oracle… oo waan raaci lahaa, laakiin doqonimada khamaarista ee Linus iyo Icaza midkoodna ma isticmaalo….
daadka 85 dijo
Mid soo baxa iyo mid kale oo soo gala ayaa iman doona, taasi waxay u dhacaysaa iyadoo leh qaybinta badan oo Linux ah, qaarna waa dhibic soo jiidasho leh oo Linux leedahay, dadka kale, waxay yareysaa qaybteeda. Taasi waxay noqon laheyd mowduuc wanaagsan oo laga wada hadlo.
Ku jawaab ping85
Had iyo jeer waan difaaci doonaa inay jiraan tanno qaybinta ah. Intaa waxaa dheer, badankood waxay doortaan mid ka mid ah kuwa ugu caansan waana taas. Xaqiiqda ah inay jiraan dhowr nooc oo Windows ah haddii ay meesha ka saarto qayb ka mid ah maxaa yeelay jiritaankeeda qiil looma heli karo.
Waxaa jira waxyaabo badan oo loogu talagalay wax walba, oo diiradda saaraya dhagaystayaal aad u yar oo baahidooda la qaba.
Tan oo distros ah hoos uma dhigayso Linux laakiin iyagu ma aha gunno sidoo kale. Waxaa jira wax badan oo distros ah oo aan waxba soo kordhineynin. Distros oo midba midka kale u dagaallamo isla isticmaale, oo si isku mid ah iyo falsafad isku mid ah u bixiya. Taasi ma caawinayso horumarinta GNU / Linux. Taasi waxay labanlaabaysaa dadaallada xagga rabitaanka ah.
Ma badinayso dadaallada maxaa yeelay waxay diiradda saarayaan kooxo kala duwan oo adeegsadayaal ah, sidoo kale waxay soo saartaa aqoon.
Miyaad soo jeedineysaa in dhammaan walxaha kala duwan ay bartilmaameedsadaan kooxaha isticmaala kala duwan? Hadaad aamintay inaad qaldantahay. Waxaa jira distros ku saleysan Debian oo leh Xfce oo aan midba midka kale ka duwaneyn. Taasi ma tirineyso qaar ka mid ah waxyaabaha ka soo jeeda Ubuntu. Waxaad ii sheegi doontaa aqoonta ay dhaliso.
Maaha kuwo iskudaya dadaalo maxaa yeelay waxyaabahaan kaladuwan waxaa sameeya kooxo ama dad kaladuwan. Abuuritaanka barnaamijka bilaashka / furan ee furan ma aha mid la mid ah sida shirkad softiweer ah, waxay u egtahay shabakad. Si aan u soo xiganno Raymond: "... bulshada Linux (kernel) waxay u ekaatay sida bajaajlaha Babel oo mashquul badan, oo ay ku dhexjiraan shaqsiyaad ujeedooyin iyo dariiqooyin kala duwani ka duwan yihiin .."
Kama wada hadlayno sida loo abuuray software bilaash ah. Waxaan abuuray qaybinta ku saleysan Kubuntu oo aan waxba ku darsanaynin software bilaash ah, sababtoo ah ma jiraan lambarro / naqshado cusub. Waxaan ku koobay nafteyda isticmaalka shaqada dadka kale. Qaarkood waxay sidaas oo kale sameeyaan iyagoo siinaya astaamo iyo magacyo cusub. Thanks to liisanka bilaashka ah waxaan si dhib la'aan ah isugu dari karnaa waxyaabaha kale ee ka soo baxa. Waa la samayn karaa laakiin ma aha wax faa'iido leh ama qiimo leh. Haddii dadka ka shaqeynaya iskudhafka isku midka ah ay isbahaysi ka geystaan ​​horumarinta mashruuc guud, waxay gaarayaan guul weyn. Qadarka ugu badan ee distros waa shar GNU / Linux. Xumaan ka yar xorriyadda ayaa keentay.
Waa run in heshiiska ku saabsan mashaariicda uu ka faa'iideysan karo horumarkooda, laakiin markaa kala duwanaanta (ama kala-tagga) maahan dhibaatada laakiin taa badalkeeda heshiis la'aanta ka dhexeysa shaqsiyaadka ama bulshada barnaamijyada bilaashka ah, tirada badan ee dhismaha ama mashaariicda la midka ah waa cawaaqib, astaamo. Haddii aan isbarbardhig ku sameyno nidaamyada siyaasadeed, waxaan dhihi karnaa kelitalisnimo ayaa aad looga jecel yahay dimuqraadiyadda, maxaa yeelay marka hore waxaa jira hal xisbi oo keliya (dhammaantoodna, ma ahan dhammaantood) "toogasho" isku dhinac ah iyo tan labaad waxay ku dhuftaan xisbiyada, qaar badan oo ka mid ah oo isku fikir ah (halkan Argentina bidixda waxay u qaybsan tahay xisbiyo badan tanina waa mid ka mid ah dhaliisha laga sameeyay). Sidaad xaqiijineyso, wax waliba waa cawaaqib xorriyadeed sida kaliya ee lagu daro waa iyada oo la isku raacsan yahay, waan ku raacsanahay taas, laakiin xaq uma lihi inaan dhaleeceeyo waxa dadka kale ay ku sameeyaan xorriyadaha ay software-ka bilaashka ah iyaga siiyaan. Salaan.
Kali talisnimo ≠ Dimuqraadiyad ≠ Dowlad la’aan.
Haddii aan si dhow u eegno barnaamijka bilaashka ah ee "dhaqdhaqaaqa" waa fowdo, ma jirto xarun awood, ma jirto maamul; Waxay ku xiran tahay ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee shakhsiyaadka inay midoobaan midba midka kale si ay uga shaqeeyaan waxa ay wadaagaan (barnaamijka la sii daayay, ee qof walba iska leeyahay laakiin aan cid gaar ah iska lahayn). Dabcan waxaan u qaadaa fowdo xagga siyaasadda, ma ahan isku macno ahaanshaha khalkhal ama abaabul la'aan. Salaan iyo mahadsanid wada hadalka.
In ay jiraan qaybsi fara badan waa wax caadi ah, dabiici ah, iyo qayb ka mid ah geedi socodka horumarka. Halkan fikradda ah "Xulista Dabiiciga ah" ayaa si qumman u khuseysa: Kaliya kuwa ku habboon ayaa badbaadi doona. Sida ugu fudud ee dabiiciga laftiisa. Dhaleeceynta tan waxay la mid tahay dhaleeceynta in ay jiraan noocyo badan oo shimbiro ah ama kalluun ah. Maxaad daryeeshaa intee nooc ama Linux distros ah ayaa jira? Iyaga daa oo dabeecadda ha go'aansato midka ugu fiican. Waxaan u arkaa inay tahay hawl caafimaad oo aad u fara badan.
Fikirkeyga ma dhiibin, kaliya waxaan ka tagay maaddada oo furan. Midkee jidka u qalma maqaal gooni ah, miyaadan u malayn?
+1 Kaladuwanaanta waxay jirtaa ciqaabta xorriyadda. Kala duwanaanta hoose waxay muujineysaa in softiweerka bilaashka ahi uusan keenin xamaasad badan. Tan waxaan ula jeedaa ma fiicna inay jiraan heerar iyo is afgarad ku saabsan qodobbada qaarkood, laakiin qodobbadaas wadaagga ahi waxay ka imaan karaan oo keliya heshiis la wadaago oo ku saabsan aagga xorriyadda. Salaan.
Cosiaca Waxaan u maleynayaa inaad ku khaldan tahay faallooyinkaaga, ha ka noqonin aabbe ka badan POPE, maxaa yeelay Linux waxaa adeegsada hay'ado badan mana aha oo keliya kharashka laakiin waa faa'iidooyinkiisa
Waa wax laga xumaado in distoorkani uusan sii wadin sii wadistiisa. Muddo dheer ayaan istcimaalay (nooca 3aad ayaan qabaa) waxaana igu reebay aragti wacan.
In kasta oo qaybintu ay timaaddo oo tagto mararka qaarkood haddii ay xoogaa adag tahay in la aqbalo mid baa baaba'aya, laga yaabee inaysan ku xirnayn saameynta ay ku leedahay tirada dadka isticmaala laakiin xaqiiqda ah in qaarkood ay leeyihiin astaamo u gaar ah oo iyagu iska leh.
Xaqiiqdii waad saxantahay… waxay iga dhigaysaa inaan xasuusto sida xun ee aan uga dareemay kiiska Pardus ee lahaa wax walba oo u socday si ay u noqoto caan caan ah oo tixraac loo wadaago oo aan u fiirsado sida ay ku dhamaatay.
Gacaliye, waan kugu raacsanahay, xusuusinta kiiska Pardus wuxuu i siiyaa ceeb aad u weyn, iyo inaan u maleynayo inaan ka caawiyay qorista wikis, si aan ugu ogeysiiyo fagaarayaasha, iyo waliba inaan si guul leh u awoodo inaan ku rakibo kumbuyuutar dhowr ah saaxiibayaal ... waa ceeb inaad lumiso wax aad u fiican. Waxa ugu fiican ayaa ah inay durba bilaabeen inay dejiyaan nambarka Pardus (Kaptan, Comar), oo loo wareejiyo mashaariic kale / mashaariic, sidaa darteed waxay nooga tagaysaa dhaxal weyn. . Pardus gebi ahaanba ma dhiman… waxaa jira mashruuc halkaas ka socda oo la yiraahdo Anka… ^^
Waxaan u adeegsaday distoorkan in mudo ah waxaana kula qornaa dhowr saaxiibo si aan ugu dhiirigaliyo inay isticmaalaan Linux. Waxaan u maleynayaa inay tahay wax laga xishoodo in distros sidan u lumo. Laakiin sida dadka kale yiraahdaan waxay u egtahay sida nidaamka dabiiciga ah ee u dhexeeya kuwa imanaya iyo kuwa baxa.
Kuwa kale ee Dock ku dhammaaday isticmaalka qalabka '
Waxaan si daacad ah u dhihi karaa Dreamlinux waa mid ka mid ah qeybinta halka Xfce uu ka ifayo una muuqdo qurux .. Waa wax laga xumaado runta inay taasi dhacdo .. Hagaag, laga yaabee inuu qof ku faraxsan yahay oo uu sii wado inuu ilaaliyo ama fargeeto ka mid ah ..
Kuwani waa waxyaabaha iga baqaya ee ku saabsan hargabka yar yar. Taasi iyada oo aan la helin bulsho weyn oo horumarineed, haddii midkood fashilmo, way dhammaatay. Waxaan ka fekerayay inaan badelo gacaliyahayga qaaliga ah ee Manjaro in muddo ah (ma awoodin inaan cusbooneysiiyo kernel muddo bilo ah maxaa yeelay waxay iga tagaysaa bilaa kumbuyuutar ama taabasho), maxaa yeelay waxaan aad u xiiseeyaa inaan isku dayo wareegga semi taasi waxay i siineysaa xasilooni dheeri ah (oo maya, aniga iima shaqeyso aniga Chakra maxaa yeelay ma adkeysan karo KDE), tan iyo waqtigeygii aan ku heli lahaa gacmaheyga PC-ga ayaa si muuqata hoos loogu dhigay, laakiin aniga oo aan lumin dhamaan faa iidooyinka Arch. waxyaalahan aadan waligaa ogayn. Waxaan u maleynayaa in hadda ay ugufiican tahay in lagu sii wado hooska distro weyn sida Arch.
Waa run in mararka qaarkood ay dhibaato noqon karto in la helo waxyaabo fara badan, laakiin aakhirka qaar badan oo ka mid ah, kuwa aan wax ku soo kordhin wax cusub (had iyo jeer maahan sida ay tahay Pardus), way baaba'aan oo kuwa ugu fiican ayaa hadhay oo runtii leh wax la soo bandhigo, wax ka duwan ama hadafyo, habka shaqada ama farsamada. Marka looma arki karo dhibaato dhab ah. Dunida Linux-ka, dadka isticmaala badankood waxay adeegsadaan Ubuntu iyo / ama noocyo kale sida Kubuntu, iwm, Linux Mint, Arch, Fedora, Debian, Chakra, Slackware, openSUSE, Gentoo, PCLinuxOS.
Kala duwanaantaani waxay muujineysaa xorriyadda dhabta ah ee ay bixiso Linux iyo ilo furan iyo faa'iidooyinkeeda aan la soo koobi karin.
Qaali, waxay ila tahay aniga inaan haysto kala duwanaansho fara badan aysan ahayn wax la doorbido sida dad badani yiraahdaan, aniga ahaan waa ii khasaaro, inta udhaxeysa qaybinta waxaa jira kala duwanaansho badan (labadaba xirmooyinka rakibayaasha, siyaabaha loo adeegsado barnaamijyada, iwm.), tusaale ahaan waxaa jira baakado RPM ah oo loo sameeyay inay ka shaqeeyaan FEDORA mana ku ordaan mandriva ama ROSA, markaa mararka qaarkood waxa aan haysanno waa mid gebi ahaanba cusub, OS kala duwan, hadda ma ahan sidii inaan dhahno waxaan qabannaa LINUX.
Waxaan bilaabay inaan arko Linux in ka badan 10 sano ka hor waxaanan bilaabay RedHAt oo leh KDE, waxay ila noqotay wax fiican laakiin markii aan arkay qaybinta kale waan sii waday isku daygooda, ilaa aan ka helay mandrake (wakhtigaas) waana ka sii saaxiibtinimo badnaa laakiin dhibaatooyin ayaan kala kulmay darawalada dhawaaqa. Marka waxaan soo maray dhowr qeybinta ilaa aakhirki aan ku soo laabtay si aan u guuleysto, xaaladan waxaan ku sii jiray win7 (xasilloon, shaqo dhib kuma qabin), ka dib waxaan helay ubuntu, laakiin markii ay u badaleen midnimada waxay umuuqatay mid aad u culus oo Waxaan go aansaday inaan ku laabto si aan 7 mar labaad ugu guuleysto.
Hagaag, tijaabinta iyo tijaabinta inta qaybinta aan arkay, waxaan helay MINT, xasiloon, deg deg badan, saaxiibtinimo leh, laakiin aakhirkii wali waxay u dhawdahay ubuntu, desktop-ka qorfe wuu fiicanyahay inkasta oo wali u baahan yahay inuu bislaado, waxaan rajaynayaa version waxay noqon doontaa wax aad u fiican. Si aanan u kordhin mowduuca wax ka yar 1 bil ka hor waxaan helay ROSA Fresh 2012, waa qeybinta Ruushka (oo ku saleysan madriva), waxay isticmaashaa KDE ay iyagu wax ka beddeleen, iminkana waa tan aan u isticmaalo xitaa shaqadayda , waxay la timaadaa dhammaan baakadaha lagama maarmaanka ah Si loo shaqeeyo, waxay aqoonsatay dhammaan qalabka ku jira 3 laptops oo kala duwan oo ku yaal noocyada DELL, HP iyo SAMSUNG (kani waa kan ugu cusub, DELL waxay qiyaastii jirtaa 4 sano ama ka badan).
Runtu waxay tahay in hadda aan ku qanacsanahay qaybintan iyo waxa aan aqriyay waa shirkad Ruush ah oo la shaqeysa xalal kala duwan oo Linux ah, oo ay ku jiraan nooc loogu talagalay server-yada ku saleysan REDHAT.
Marka la soo koobo, sida ay yiraahdaan, qaybintu way timaaddaa oo tagtaa laakiin waxaan u maleynayaa in taasi fikraddu ahayn, mid ka mid ah adeegsade ahaan wuxuu doonayaa inuu yeesho OS deggan, saaxiibtinimo leh oo leh taageero wanaagsan, aniga waxba iima tarin in berri "qof" la yimaado Qaybinta cusub ee aniga aniga si fiican iigu shaqeysa laakiin in dhowr sano kadib ay baaba'do, inbadan ayaa si fiican u oran doonta, waxaad raadineysaa mid kale, laakiin shirkad kama boodi kartid qaybinta sidaas oo kale, shirkad ku taal aagga nidaamyada , waxaa horeyba u jiray shaqooyin badan oo halkaa ka jira oo raadinaya qaybinta cusub iyo isku dayga inay ka caawiso qalabka meesha yaal
Gunaanad ahaan waxaan u maleynayaa in qeybinta Linux aysan jiri karin tiro aad u badan, haddii ay jiraan dhowr waa inay ahaadaan ujeedooyin gaar ah (loogu talagalay server-yada, isticmaaleyaasha guryaha, isticmaaleyaasha shirkadaha, ciyaaraha, iwm. Ama mid badan) waxay leeyihiin halbeeg, kaas oo haddii aan beddelo aan weli ku jiro Linux-ka umana muuqato inaan u socdo OS kale.
Waa ra'yigayga hooseeya ee waayo-aragnimada aan ku leeyahay Linux iyo qaybinta aan tijaabiyey.
Aad ayaan ugu qanacsanahay faallooyinkaaga, waxaanan aaminsanahay in erayga muhiimka ahi uu yahay heer, waa inuu jiraa heshiis, macno malahan maktabadda ay adeegsan doonaan, laakiin sida ay xogtu u shaqeynayso (tusaale ahaan) si loo fududeeyo shaqooyin gaar ah oo loogu talagalay horumariyeyaasha darawalka tusaale ahaan, qaab gaar ah Linux ayaa ah khayaano koox "carruur" ah oo doonaya inay sii ahaadaan bartamaha dareenka laakiin in qofna uusan ogayn sirahooda aad u badan iyadoon laga rabin "naadiga" "Isha furan - maskaxda xidhan waan u sheegayaa, sii wad adayga adoo raba inaan u sheego qof walba sida wax loo sameeyo, laakiin alaabta caruurtu ku ciyaarto ayaa faraha ka baxday, Linux waxay leedahay wax walba oo noqon kara nidaam qalliin oo aad muhiim u ah, laakiin waxaa jira dad badan oo xiiseynaya sidaasna ku xajinaya, si "loogu sii wado ka mid ahaanshaha kooxda la xushay» (Dhirbaaxo saafi ah oo qaan-gaar ah oo aan qaan gaarin). Dhinaca kale, maahan oo keliya shirkadaha inay u baahan yihiin nidaam bixiya nabadgelyo gaar ah, dadka isticmaala sidoo kale way sameeyaan, tanina waa mid ka mid ah furayaasha sababta Linux ay ugu fashilantay inay iska dhigto suuqa desktop-ka isla markaana dagaal dhab ah uga hortagto Windows, Gaar ahaan, waan shaqeeyaa sayniska kombiyuutarka laga bilaabo 17 sano ka hor, waxaan isticmaalay oo aan raacay horumarka Linux tan iyo markii la aasaasay waxaan soo maray dad badan (Mandrake, Corel Linux, Conectiva, Red Hat ka dibna Slackware, Ubuntu, Fedora, OpenSuse, Mint, Dreamlinux, PClinxOS, iyo the Liistadu aad ayey u dheertahay), Mandriva (maanta Mageia iyo Rosa) iyo Mint waligoodba waxay ahaayeen kuwa aan jeclahay (Haddii Koofiyad Cas - Kde iyo Debian kale - Gnome) sabab fudud: Waxaan ku guuleystey inaan wax walba ka dhigo iyadoo aan dhibaatooyin aad u tiro badan, way xasiloonaayeen waxayna ii ogolaadeen inaan dhib la’aan ku shaqeeyo waqtiga. Waxaan u maleynayaa kala duwanaanta inay wanaagsan tahay laakiin aan lagu khasaarin shaqo aan micno lahayn ama aragti la'aan mustaqbalka (heerarka Linux) taas oo sidoo kale ka faa'iideysan doonta soo saarayaasha qalabka ee horumarinta wadayaasha iyo shirkadaha tixgelinaya fikradda u beddelashada ilaha furan. Weli waxaan u maleynayaa in mid ka mid ah khaladaadkii ugu xumaa ee Linux "carruurta" uu sameeyay qalad weyn markii uu diiday shirkad sida Corel ah markii ay isku dayday in ay u wareegto barnaamijyada bilaashka ah, illaa maantana aan wada bixineyno qaladkaas. Ugu dambayntii waxaan aad uga xumahay in distro sida Dreamlinux ah oo bixisay nidaam xasilloon, oo raalli ka ah isha iyo xulasho aad u fiican oo software aysan lahayn sii wadis.
Marnaba kuma fikirin inaan akhriyo warkan; Waxay igu kacday inaan helo maxaa yeelay soo degsigeedu mar dambe lama heli karo waxaanan ku qoraa tan aan hadda dhammeeyay rakibkeeda; Waxaan bilaabay raadinta macluumaad ku saabsan sida loo rakibo barnaamijyada waxaan ka helay warkaan ... waa ceeb run ah ...
LDD: Wifiway qaybinta loogu talagalay baaritaanka shabakadaha WiFi
Tijaabinta FirefoxOS mahadsanid r2d2b2g